Buy Star City For Rent and Sale (ID-667) (10Lks) in သန်လျင် on ipivi.com
Star City For Rent and Sale (ID-667)
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : 81ရက်​
Star City Condo is located in Thanlyin Township. Beside of Bago River. Living area - 624 sqft, organized by Living-room, One Master Bed-room, Kitchen and Bath-room.
Rent Price - 800 USD (Nego)
Sale Price - 1000 Lks (Nego)
ငှားရန်နှင့် ရောင်းရန်ရှိသော Star City ကွန်ဒိုမှာ ပဲခူးမြစ်အနီး သန်လျင်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ကွန်ဒိုအိမ်ခန်းအကျယ် - ၆၂၄ စတုရန်းပေရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ငှားရမ်းခ ဈေးနှုန်း - ဒေါ်လာ ၈၀၀ (ညှိနှိုင်း)
အရောင်းဈေးနှုန်း - သိန်း ၁၀၀၀ (ညှိနှိုင်း)
ငှားရန်နှင့် ရောင်းရန်ရှိသော Star City ကွန်ဒို(ID-667)
Condo Rent အဌား
GEMS CONDO ငှားရန်
အမည်: Star City For Rent and Sale (ID-667)